Yoast ၏ WordPress SEO ဖြင့် Setup Authorship | Martech Zone
Setup Authorship ကို Yoast ၏ WordPress SEO ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 5, 2013 ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 5, 2013 Douglas Karr
ခဏတစ်ဖြုတ်, ငါတို့ဘယ်လိုရှိခဲ့ပုံကိုမျှဝေခဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင် Authorship ကို setup လုပ်ပါ. စာရေးသူ အရေးပါတဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်လာတယ် ကလစ် - မှတဆင့်နှုန်းထားများတိုးပွားလာ ရှိသည်သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များကိုအပေါ် ကြွယ်ဝသောအတိုအထွာနှင့်သင်၏ WordPress site ကိုကောင်းစွာအဆင့်သတ်မှတ်ခံရနိုင်ခြေများပြားလာခြင်း။
စာရေးဆရာများကိုကူညီရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများစွာလိုအပ်နေသေးသည်။ ထိုတွင်ရှိသည့် plugin ရေးသားသူများမှကျေးဇူးတင်ပါသည် Joost De Valk။ ဤရေးသားနည်းကိုဖွင့်ပေးသောဤနည်းလမ်း၏အဓိကသော့ချက်မှာကျွန်ုပ်သည်စာရေးသူပေါင်းများစွာပါ ၀ င်သောဆိုဒ်များကိုသာအာရုံစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရှိပါတယ် WordPress အတွက်ရေးသားထားသော plugins များဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရိုးသားစွာပေါင်းစပ်ကြိုက်တယ် Yoast ၏ WordPress SEO plugin အစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ။ ဒီနေရာမှာဘယ်လို:
ထည့်သွင်းပြီးဖွင့်ပါ Yoast ၏ WordPress SEO plugin။ ၎င်းသည်သင်၏ပရိုဖိုင်စာမျက်နှာများပေါ်ရှိလိုအပ်သောလူမှုရေးနယ်ပယ်များကို enable လုပ်ပြီးဂူဂဲလ်မှတွားသွားသည့်လိုအပ်သော schema markup ကို enable လိမ့်မည်။
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်တိုင်းတွင်အညွှန်းနှင့်တစ်ခုတည်းတင်ထားသောစာမျက်နှာများပေါ်တွင်ရေးသားသူတစ်ယောက်ရှိကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်တွင်လိုအပ်သောကုဒ်ကိုမည်သို့ကြည့်ရမည်ကိုသင်ကြည့်နိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင် Authorship ကို setup လုပ်ပါ.
တစ်ခုဖွံ့ဖြိုး စာရေးသူစာမျက်နှာ သင်၏ဘလော့ဂ်ပေါ်ရှိစာရေးသူများအားလုံးကို visitors ည့်သည်များမြင်တွေ့နိုင်အောင်သင်၏ template ထဲတွင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တင်ထားသည်ကိုသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ထပ်စစ်ထုတ်ခြင်းအချို့ပြုလုပ်သည်။
mine ကဲ့သို့စာရေးသူပရိုဖိုင်းစာမျက်နှာကိုပြုစုပါ - Douglas Karr။ သူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်းအချက်အလက်အပြင်သူတို့ရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတွေအားလုံးကိုငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်တယ်။ Google+ link သည်ဤနေရာတွင်သော့ချက်ဖြစ်သည် - စာရေးသူနှင့်ပရိုဖိုင်းအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သော rel element ကိုထုတ်ဝေသည်။
သင့်ရဲ့စာရေးဆရာသူတို့ရဲ့ဖြည့်ပါ ဂူဂယ်လ် + ကိုယ်ရေးအချက်အလက် URL သူတို့ရဲ့ WP အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်း၌တည်၏။
သင့်ရဲ့စာရေးဆရာများသူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ထည့်သွင်းပါ ဂူဂယ်လ် + ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထဲမှာ Contributor အပိုင်း။
စာရေးသူစာမျက်နှာနှင့်စမ်းသပ်ပါ ဂူဂဲလ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဒေတာစစ်ဆေးခြင်း ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
Tags: စာရေးသူစာရေးသူwordpress ရေးသားသူwordpress ရေးသားသူ plugin ကိုyoast
convergge: SMB အတွက် Integrated Cloud CRM